Jigjiga oo Gumaysiga Iyo Adeegayaashiisu cadaadis xoogan ku hayaan. | ogaden24
Jigjiga oo Gumaysiga Iyo Adeegayaashiisu cadaadis xoogan ku hayaan.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya dhibaatooyin hor leh oo uu gumaysiga wayaanuhu ku bilaabay shacabka masaakiinta ah ee Ogaadeniya gaar ahaan Shacabka ku nool Magaalada Jigjiga.
Ciidamada waayanaha iyo Kooxda Maafiyada ah ee dhidid dhawrka u ah Gumaysiga ayaa lagu soo waramayaa inay laba jibaareen dhibaatayntii ay awalba ku hayeen Shacabka aan hubaysnayn ee Soomaalida Ogaadeenya, iyaga oo kula kacaya noockasta oo dhib Iyo Ciqaab ah.
Qaar kamid ah Shacabka Ogaadeenya ee Jigjiga ku nool oo aan xidhiidh la samaynay ayaa noo sheegay in maalmahan uu aad u kordhay gabood falka cadawgu ka gaysanayo Gudaha Magaalada Jigjiga.
Askarta TPLF Iyo Kooxda damiirlaawayaasha ah ee Hawaarinta ayaa habeenadan Magaalada Jigjiga ka bilaabay baadhitaan Iyo fatash Xoogan oo ay Gudaha ugu galayaan Guryaha xaafadaha kala duwan ee guud ahaan Magaalada Jigjiga, waxaana la sheegayaa in baadhitaankan ay qaybta koobaad ku fulinayaan nooc dhuljiinmo iyo xan dhagaysi ah kadibna ay Guryaha u daadanayaan dadka joogana ay kula kayaan jidh-dil iyo handadaad halka qaarkoodna ayba la tagaan.
Isgoys kasta oo Jigjiga ku yaala waxaa habeenkii la istaajin laba ama sadex kamid ah Hawaarinta jahwareersan si ay ubaadhaan bajaaj yada iyo gaadiidka shacabku leeyahay, sidaas oo kale waxay guri ka guri u galayaan Xaafadaha Jigjiga, waxaana la sheegayaa inay dad badan ka kaxaysteen guryahooda meel ay geeyeena aan war loo haynin.
Sidoo kale waxay faarujiyeen albeerkooyin ama Hotelo jiif oo ku yaalay Jigjiga kuwaas oo la sheegay inay dhamaan dadkii jiifay la tageen xabsiyadana Ciidamadana ay gaysteen, si ay halkaasi ugu ciqaabaan.
Dhibaatadan uu gumaysigu ku hayo shacabka Ogaadeenya ayaa ah mid waligeedba soo jirtay, waana mid ay shacabka Soomaaliyeed ee Ogaadenya la qabsadeen oo nolol maalmeed u noqotay.
Wixii kasoo kordha xaalada wadanka Ogadeniya dib ayaan kasoo gudbin doonaa hadii Eebbe Idmo ee la socda Insha Allaah.